နိုင်ငံခြားသူထံမှ လုယက်သွားသည့် ပစ္စည်းအချို့ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်၍ ပိုင်ရှင်ထံ ပေးအပ်
ပို့စ်တင်ချိန် - 3/13/2014 02:45:00 PM
မန္တလေး ၊ ၁၃-၃-၂၀၁၄
မန္တလေးမြို့သို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိ လာသည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် Ms.Sarah Rulk Anvoner ၏ ပျောက်ဆုံး ပစ္စည်းများကို ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူအား ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးပြီး ပိုင်ရှင်ထံ ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေး အပ်မှုကို ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် မြို့မရဲစခန်း တွင် ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မတ် ၅ ရက်ည ၈ နာရီခွဲက အင်္ဂလန် နိုင်ငံသူ Ms.Sarah Rulk Anvoner နှင့် PP No. 507719479, Visa No. B470813 ပါ နိုင်ငံခြားသူ နှစ်ဦးသည် စက်ဘီး တစ်စီးစီဖြင့် စီးနင်း လာစဉ် Ms. Sarah Rulk Anvoner ၏ စက်ဘီး ရှေ့ခြင်းတွင် ထည့်ထားသည့် ကျောပိုးအိတ်ကို ဆိုင်ကယ်စီး အမျိုးသား တစ်ဦးက ဆွဲယူ ထွက်ပြေး သွားသဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ ၏ တိုင်ကြားချက် အရ မြို့မရဲစခန်း က (ပ)၁၉၈/ ၂ဝ၁၄၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၈၂အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန် သူ မင်းသူအောင် (ဘ) ဦးကိုကိုကြီး ၂၇လမ်း၊ ၈၈-၈၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်နေသူ ကို ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိကာ ပစ္စည်းအချို့ ပြန်လည် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်လည် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ရွှေရောင် iPhone5S တစ်လုံး၊ ပန်းရောင် iPod တစ်ခု၊ Sony Camera တစ်လုံး ၊ Sim Card တစ်ခု၊ အဖြူရောင် iPod ရော်ဘာ ကာဗာတစ်ခု တို့ကို ပိုင်ရှင် Ms.Sarah Rulk Anvoner ကို မိမိနိုင်ငံတွင်း ခရီးသွားစဉ် ပြန်လည် ဆက်သွယ် ခေါ်ယူ၍ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် မြို့မရဲစခန်း မှ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အုန်းခင်၊ စခန်းမှူး ကျော်သာဦး နှင့် ESifhTourist Police Force မှ တပ်ဖွဲ့စုမှူး ရဲမှူး မောင်မောင်အေး တို့က မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ညီညီဆွေ တို့ရှေ့တွင် ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည် ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၅၆)